ग्रुपसोल्भर: मार्केट रिसर्चमा लीवरेज एआई र एनएलपी Martech Zone
शुक्रवार, अक्टुबर 30, 2020 शुक्रवार, अक्टुबर 30, 2020 Douglas Karr
यदि तपाईंले कहिल्यै सर्वेक्षणको विकास गर्नुभयो र उत्तरहरूबाट मात्रात्मक र गुणात्मक खोजहरू प्राप्त गर्ने आशा राख्नुभयो भने, तपाईंले बुझ्नुभयो कि प्रश्नहरूको शब्दहरू बनाउन कति गाह्रो हुन्छ। तपाईंले सोध्नु भएको शब्द, संरचना, र व्याकरणले परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ जुन तपाईंको अनुसन्धानलाई गलत दिशामा लैजान्छ।
एक उत्पाद प्रबन्धक को रूप मा, म ध्यान समूहहरु संग धेरै मा यो भाग्यो। यदि मैले नयाँ प्रयोगकर्ता ईन्टरफेसको परीक्षण गरिरहेको छु भने, प्रतिक्रियाको लागि सोध्नु भएकोले प्राप्तकर्तालाई ईन्टरफेस खोज्न र केहि गलत फेला पार्न सक्दछ ... यो राम्रोसँग डिजाइन गरिएको हुन सक्छ भन्ने तथ्यको बावजुद। यदि मैले सोधें यदि केहि गाह्रो छ वा केहि हराइरहेको छ भने, प्रयोगकर्ताले तुरून्त एक समस्या खोज्दछ ... जुन अवस्थित हुन सक्दैन।
यसको सट्टामा, हामीले भर्खर एउटा कार्य गर्नका लागि प्रयोगकर्तालाई भने र त्यसपछि उनीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भनेर वर्णन गर्नुहोस्। जबकि यसले कुनै पूर्वाग्रह हटायो, यसको गुणस्तर अनुमानहरू वा सिफारिसहरूमा परिणामहरूको मात्रा पुष्टि गर्न धेरै पोष्ट विश्लेषणको आवश्यक पर्‍यो। ती नतिजा प्राय: पनी पनि थिए राम्रो अनुमान... होईन सांख्यिकीय मान्य निष्कर्ष.
कसरी प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग र मेशिन लर्निंग
केहि सब भन्दा धनी, धेरै परिवर्तनकारी अन्तर्दृष्टि खुला-अन्त्य प्रश्नहरू सोधेर आउँदछन्। किन एक आदर्श उदाहरण हो। तर जवाफ किन संख्यात्मक, बाइनरी, वा विकल्प प्रतिक्रिया होइन ... त्यसैले व्यावसायिक निर्णयहरूलाई निर्देशित गर्न खुला-अन्त प्रश्न सोधेर तपाईलाई आवश्यक परिमाणात्मक र गुणात्मक परिणामहरू प्राप्त गर्न सँधै गाह्रो छ।
धन्यवाद, प्राकृतिक भाषा प्रशोधन (NLP) र मेशिन सिकाइ (ML) यी मुद्दाहरूलाई जित्न सक्छ! भीड खुफियाको साथ मेशिन लर्निंगको संयोजन गरेर, ग्रुपसोल्भर एक बजार अनुसन्धान टेक्नोलोजी प्लेटफर्म हो जसले अनलाइन सर्वेक्षणमा गुणात्मक साथै गुणात्मक प्रश्नहरू सोध्न र समेकन गर्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गर्दछ।
ग्रुपसोल्भर यो काम आफैले गर्ने प्लेटफर्महरू, जस्तै सर्वेक्षण बाँदर र गुगल सर्वेक्षणहरू, र म्याकेन्से एण्ड कम्पनी र एसेन्चर जस्ता पूर्ण-सेवा अनुसन्धान कम्पनीहरू बीच फिट हुन्छ।
के ग्रुपसोल्भर अलग सेट गर्दछ प्राकृतिक भाषा उत्तरहरूको प्रसंस्करणको लागि तिनीहरूको दृष्टिकोण, प्रयोग गरेर:
भीड बौद्धिकता उत्तरदाताहरूले खुला शब्दहरूको जवाफ आफ्नै शब्दमा दिन्छन्, त्यसपछि तिनीहरू सहयोग गर्दछन्।
मिसिन प्रशिक्षण - खुला अन्त्य प्रश्नहरूको उत्तरहरू डायनामिक र सेल्फ क्यालिब्रेटिंग एल्गोरिथ्मद्वारा प्रशोधन गरिन्छ।
उन्नत तथ्या .्क - प्लेटफर्मले प्राकृतिक भाषा उत्तरहरू मान्य गर्दछ र गुणात्मक अन्तरदृष्टिहरूको मात्रा छ।
ग्रुपसोल्भर उपकरण सामेल
एआई खुला जवाफ ™ - भीड खुफियाको साथ मेशिन लर्निंगको संयोजन गरेर, ग्रुपसोल्भर स्वत: संगठित हुन्छ र खुला-उत्तर जवाफहरूको मात्रा गर्दछ। डाटा प्रशिक्षण छैन, कुनै मानवीय मोडरेटिंग छैन, र नि: शुल्क-पाठ कोडिod आवश्यक छैन।
IdeaCluster ™ - आईडियाक्लस्टरले व्यक्तिगत खुला-अन्त जवाफहरूमा सहकार्य देखाउँदछ। ग्राहक व्यक्तित्व निर्माण गर्दा वा ब्रान्डको कथा बताउँदा साह्रै सहयोगी हुन्छ। यो सहि छ - ग्रुपसोल्भर क्वालिटिभ डाटाको साथ एक विशेष सम्बन्धबाट स्वतन्त्र सहसंबंध र प्रतिगमन मोडेलहरू स्वतन्त्र पार्‍यो।
IntelliSeament ™ - इन्टेलिसेमेन्ट एक बौद्धिक सेग्मेन्शन उपकरण हो जसले तपाईंलाई बुझ्न सक्दछ कसरी खुला उत्तर प्राप्त प्रश्नहरूका उत्तरहरू विशिष्ट उत्तरदाता खण्डहरूका लागि फरक छन्। यो घासको गल्लीमा कथा खोज्ने जस्तो छ।
आईडियाक्लाउड ™ - आइडियाक्लउड खुला-अन्त प्रश्नको सबैभन्दा समर्थित उत्तरहरूको एक कॉम्प्याक्ट र प्राथमिकता प्रस्तुतीकरण हो। ठूला फन्टले उत्तरहरूको बीचमा उच्च समर्थनको साथ प्रतिनिधित्व गर्दछ। सानो फन्ट यसको लागि हो ... राम्रोसँग, उत्तरहरू जुन यसलाई पर्याप्त रूपमा प्राप्त भएन।
सहमति समाधान ™ - सहमति समाधान अत्यधिक समर्थित उत्तरहरूको एक सेट हो जुन सकारात्मक रूपले एक अर्कासँग सहकार्य गर्दछ। यसले उत्तरहरू देखाउँदछ कि राम्रोसँग जान्छ र उत्तरदाताहरू बीचको सहमति सम्झौता गठन गर्दछ।
विकल्प जवाफ - सर्वेक्षण अनुसन्धानको रोटी र बटर हुनुको अलावा, बहु-विकल्प प्रश्नहरूको उत्तरहरू अझ राम्रा अन्तर्दृष्टिहरूको लागि उत्तरदायी क्षेत्रहरू निर्माण गर्न सहयोगी हुन सक्छ। हामी तिनीहरूलाई ताजा र वास्तविक समय मा अपडेट राख्दछौं।
डाटा आयातकर्ता - यदि तपाईंले पहिले नै तपाईंको उत्तरदाताहरूको बारेमा जानकारी संकलन गर्नुभयो भने, तपाईं यसलाई हाम्रो ड्यासबोर्डमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई ग्रुपसोल्भर डाटा काट्न वा नयाँ उत्तरदाता खण्डहरू निर्माण गर्न प्रयोग गर्नुहोस्।
उत्तर प्रबन्धक - हेर्नुहोस् कसरी उत्तरदाताहरू तपाईंको प्रश्नहरूको वास्तविक समय मा जवाफ दिन्छन्। समूह गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई एक क्लिकको साथ मान्यकरण गर्नुहोस्। हामी हाम्रो मेशिनलाई विश्वास गर्छौं, तर डाटा कहिलेकाँहि कोमल मानव स्पर्शको आवश्यक पर्दछ।
डाटा डाउनलोडर - मानक सांख्यिकीय सफ्टवेयर जस्तै एसपीएसएस, आर, वा एक्सेलको साथ थप विश्लेषणको लागि कच्चा डाटा निर्यात गर्नुहोस्।
ग्रुपसोल्भरको भिजुअल ड्यासबोर्डले प्रयोगकर्ताहरूलाई हेर्न र तपाईंको अन्तरदृष्टिसँग काम गर्न सक्षम गर्दछ। डाटा प्रशोधन र अद्यावधिक गरिएको छ किनकि यो स collected्कलन भइरहेको छ, त्यसैले तपाईं कुनै पनि समयमा परिणामहरू पूर्वावलोकन गर्न सक्नुहुन्छ।
एक ग्रुपसोल्भर डेमो अनुरोध गर्नुहोस्
टैग: aiकृत्रिम बुद्धिग्रुपसल्भरबजार अनुसन्धानबजार अनुसन्धान प्लेटफर्मmlप्राकृतिक भाषा प्रशोधनएनएलपी